1 gore 7 ago #856 by PAYSON
Ndangogamuchira email kubva kuna Peter Hawthorne. Inonzwika sekuti iye nevamwe vevamwe vake vanoda kufanana neRioooo. Ndapota verenga uye uone kana iwe usingafungi kuti zvinonzwika sekumagumo kwepamusoro-soro nzvimbo dzekushandisa panzvimbo. Ona zvaunofunga.
1 gore 7 ago #857 by rikoooo
Ndine urombo asi handina ruzivo rwezvauri kutaura nezve ...?
Uye ini handizivi kuti ndiani Peter Hawthorne.
1 gore 7 ago #858 by PAYSON
Dec 11 (1 zuva rakapfuura)
Ndiri kungoverenga DOWNLOADS yeFSX, FSX-Steam uye Prepar3D - Rikoooo, ndakazviratidza kune vamwe vandinoshanda navo uye tinofunga kuti kubatana pakati pedu kunogona kushanda zvakanaka.
Ini ndinomiririra sangano rekutsvaga dhijitari ikozvino kushanda nekambani inotungamirira teknolojia iyo inoshanda mumusika mumwechete se Android. Tinoda kuisa chikamu chakasiyana-siyana pawebsite yako panzvimbo yemutengi wedu. Nokuda kwekodzero, tinogona kufara kukubhadhara kune imwe nzvimbo munzvimbo ye $ 65.
Rega ndizive pfungwa dzako.
1 gore 7 ago #859 by PAYSON
2: 34 AM (13 maawa apfuura)
Ndinotenda nekuda kwekudzokera kwandiri.
Kuti tikupe pfungwa pamusoro pezvatinoita, tinenge tichitarisa kuti tinyora zvinyorwa zvesayiti yako. Izvi zvinowanzouya nenzira ye500-shoko nyaya uye inogona kusanganisira chikwata che 'do-follow' kumutengi wedu. Munyori wenyaya yacho aizotora nguva panzvimbo yako yepaiti uye achinzwa nezwi, maitiro, uye mararamiro aunowanzoita. Vanogona kuenda uye kunyora nyaya yakagadzirirwa yeblog yako. Iwe unogona kudzokorora, kuronga nekuramba iyo nyaya kana iwe uchiwana isina kukodzera. Tinoda kugovera pawebsite yako uye tinokubhadhara nekuda kweropafadzo yekuisa iyo. Zvisinei, hatisi kubvisa zita revatengi vedu kana marongerwe panguva ino - kazhinji kana nyaya idzi dzakatumirwa kuti dziongorore.
Chero bedzi iwe uine rusununguko, tinodawo kukumbira kuti chinyorwa chisina kuiswa se "sponsored".
Munyaya iyi, iwe ungagamuchira zvikwereti zvakatsigirwa pa www.rikoooo.com/ ? Kana mutengo watakapiwa mu email yedu yapfuura ($ 65 pamusana) unogamuchirwa kwauri, ndiudzei kuti tinogona kuenderera mberi.
1 gore 7 ago #860 by PAYSON
Aya ndiwo emaimeri ini ari kugamuchira. Ndinovimba iwe unoona kunetseka kwangu. Handifungi kuti ndinofanirwa kuona izvi. Rimwe rudzi rweSNAFU.
1 gore 7 ago - 1 gore 7 ago #861 by rikoooo
Ndinokutendai pamhinduro yenyu,
Izvi chaizvoizvo spam uye iyo emaimeri inogadzirwa nemazvo ne spammer kana bot.
Mumwe muenzaniso pano: www.mail-archive.com/[email protected]/msg28201.html
Time chokusika peji: 0.475 mumasekonzi